စီအိုင်အေ ညွှန်ကြားရေးမှူးက ကဘူးလ်မြို့တွင် တာလီဘန် ခေါင်းဆောင်နှင့် လျှို့ဝှက်တွေ့ဆုံခဲ့ - Xinhua News Agency
ဝါရှင်တန်၊ ဩဂုတ် ၂၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဗဟိုစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီ (CIA) ညွှန်ကြားရေးမှူး ဝီလီယံ ဘန်းစ် (William Burns) သည် တာလီဘန် ခေါင်းဆောင် အဗ္ဗဒူလ် ဂါနီ ဘရာဒါ (Abdul Ghani Baradar) နှင့် ကဘူးလ်မြို့၌ လျှို့ဝှက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း အမေရိကန် မီဒီယာက ဩဂုတ် ၂၄ ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ဘန်းစ်နှင့် ဘရာဒါကြား တွေ့ဆုံမှုသည် ဘိုင်ဒန်အစိုးရနှင့် တာလီဘန်ကြား အဆင့်မြင့်ရာထူးအဆင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ဆုံစေ့စပ်မှုဖြစ်ကြောင်း ယင်းဖြစ်ရပ်နှင့် နီးစပ်သူ တာဝန်ရှိသူများအား ကိုးကားလျက် မီဒီယာများစွာက ဖော်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါ လျှို့ဝှက်တွေ့ဆုံမှုကို The Washington Post က ပထမဆုံးသတင်းဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရှိ အမေရိကန် စစ်တပ်များ အပြီးသတ်ရွှေ့ပြောင်းရေးအတွက် နောက်ဆုံးရက်ကိစ္စအား ဆွေးနွေးခဲ့ဖွယ်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအစည်းအဝေးနှင့်ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပေးရန်ကိုမူ စီအိုင်အေက ငြင်းဆိုထားကြောင်း သတင်းများက ဆိုသည်။အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် “နိုင်ငံရေးနှင့် လုံခြုံရေးချန်နယ်များမှတစ်ဆင့် နေ့စဉ်အခြေခံအကြောင်းရင်းအား တာလီဘန်နှင့် ဆွေးနွေးနေကြောင်း အမေရိကန် အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး Jake Sullivan က ဩဂုတ်၂၃ ရက်က ပြောခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်သည် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရှိ အမေရိကန် စစ်တပ်မစ်ရှင် အဆုံးသတ်ရေး ယခင်ကချမှတ်ထားသော နေ့ရက်ဖြစ်သော ဩဂုတ် ၃၁ ရက်နောက်ပိုင်း ဆောင်ရွက်နေဆဲ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း သက်တမ်းတိုးရန် ပြည်တွင်းရော ပြည်ပမှာပါ ဖိအားများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။
တာလီဘန် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Zabihullah Mujahid ကလည်း အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် ဩဂုတ် ၃၁ ရက်မတိုင်မီ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ကန်ထရိုက်တာများအားလုံး ရုပ်သိမ်းသင့်ကြောင်း ဩဂုတ် ၂၄ ရက်၌ ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းတွင် အာဖဂန် နိုင်ငံသားများအား အမေရိကန် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့် နိုင်ငံအတွင်းမှ ထွက်ခွာခွင့်ပြုတော့မည်မဟုတ်ကြောင်း ၎င်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဆိုသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်း ဩဂုတ် ၁၅ ရက်က မြို့တော်ကဘူးလ်သို့ တာလီဘန် ဝင်ရောက်လာချိန်မှစ၍ ယင်းနိုင်ငံမှ အမေရိကန်နိုင်ငံသားများနှင့် အာဖဂန်မိတ်ဖက်များအား ကယ်ထုတ်ရန် အရေးပေါ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
ဩဂုတ် ၂၄ ရက် နံနက်အစောပိုင်းအထိ ၂၄ နာရီအတွင်း လူပေါင်း ၂၁,၆၀၀ ခန့်ကို ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း အိမ်ဖြူတော်က ဩဂုတ် ၂၄ ရက်က ပြောခဲ့သည်။ (Xinhua)
WASHINGTON, Aug. 24 (Xinhua) — Director of the U.S. Central Intelligence Agency (CIA) William Burns Monday heldasecret meeting with Taliban senior leader Abdul Ghani Baradar in Kabul, U.S. media reported on Tuesday.
Citing officials familiar with the matter, multiple media outlets said the meeting between Burns and Baradar was the highest-level face-to-face engagement between the Biden administration and Taliban to date.
The Washington Post first reported the secret meeting, which likely covered the issue of an impending Aug. 31 deadline for the U.S. military to complete its evacuation operation in Afghanistan.
The CIA declined to comment on the meeting, according to reports.
U.S. National Security Adviser Jake Sullivan said on Monday that the United States is engaging with the Taliban “onadaily basis through both political and security channels.”
Taliban spokesman Zabihullah Mujahid made it clear on Tuesday atapress conference that the United States should withdraw all troops and contractors before the Aug. 31 deadline.
The spokesman also said Afghan citizens would not be allowed to leave the country through the U.S. evacuation process after the deadline.
The White House said on Tuesday that around 21,600 people had been evacuated duringa24 hour-period ending early Tuesday morning. Enditem
Photo : A Taliban member stands guard in Kabul, capital of Afghanistan, Aug. 21, 2021. (Str/Xinhua)
အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ COVID-19 ရောဂါကို လွဲမှားစွာကိုင်တွယ်မှုတွင် ပြဿနာများစွာရှိနေပြီး ဆင်ခြေပေးစရာလည်း မရှိတော့ပေ